Wiricheya Inowanika Makicheni - Wiricheya Yekuwana Kicheni
Wakafunga kuti iwe unofanirwa kugadzira dhizaini nyowani kana kugadzirisa patsva yaivapo kuti uzviite wiricheya kufambidzana. Unotangira kupi? Iwe unoenzanisa sei zvirinani nemutengo? Ichi chinyorwa ndechenyu.
Tichatarisa zvimwe zveakakosha mapoinzi aunofanirwa kufunga muchikamu chekugadzira kuti kicheni chako chiwedzere wiricheya kufambidzana. Tichavhara makabati, pasi, mwenje, magetsi nemidziyo.
Zvinoenderana neADA iyo pasi yepamusoro yekukwirisa kumusoro kukwirira inofanirwa kunge iri makumi matatu nemasere ”uye isingapfuure makumi matatu nemana”. Toe kicks inofanirwa kuve 32 "yakakwira uye 34" yakadzika kuti igone tsoka yeiyo wiricheya pasi pemucheto wedare remakurukota. Panenge makumi maviri nemana 'kubva pasi, ita indents ye vakaremara mabvi emunhu, kuti vagone kunzwa vakasununguka uye vakasununguka kushandisa machengeterwo ekicheni.
Kune base makabati iwe unofanirwa kugara uchifunga mupfungwa mabvi nzvimbo yekuwana kune singi uye counter kumusoro. Iwe ungangoda kuisa yakadzika madhirowa panzvimbo yemakonati madhoo kuti zvinhu zviwedzere kufambidzana.
Makabati ekumusoro anounza dambudziko rakasiyana nekuti masherufu ekumusoro haazove kufambidzana kune mumwe munhu ari wiricheya. Funga kudzikisa iwo masherufu angangoita matanhatu ”uye ita kuti zvinhu zvezuva nezuva zviwanikwe pane iwo masherufu.
Iyo yepamusoro pevhu inofanirwa kugadzirwa kubva kune yakaoma zvinhu, kunge huni kana zvedongo tile kana dombo. Usambofa wakashandisa pasi rakapfava kunge kapeti, nharaunda rugs, kana chero rudzi rwevhu rwakapiwa kwairi. Kufambisa a wiricheya yemawoko kutenderedza parudzi urwu rwechiso kunogona kuve kwakaomarara.
Kune zvakawanda zvingasarudzwa zvinosanganisira compact florescent mwenje (CFL) mababu uye mwenje dze LED zvinoita kuti mwenje we counter pamusoro uye chitofu pamusoro pemabasa akasiyana siyana zvive nyore. Ramba uchifunga kushanduka kuri nyore kufambidzana nemumwe munhu mu wiricheya.
Mahotera ese emagetsi uye ma switch anofanirwa kuiswa paacc iri nyorekureba kwakakosha uye aya magetsi magetsi anofanirwa kuve newiredi zvakaringana kuitira kuti kudzikise izvo zvine njodzi. Muzviitiko zvakawanda nzvimbo dzekutengesera dzinoiswa kuseri kwekabhini rekasi, kungave pamusoro kana mune backsplash pachayo. Ino haisi yakanakira chinzvimbo kune mumwe munhu mune wiricheya. Vachafanirwa kusvika pamusoro kuti vashandise chiteshi. Nzvimbo yakanakisa yekutengesera mumwe munhu mune wiricheya iri kumeso kwekabhini rekasi, pasi pechitoro chepamusoro.
Imwe nzira ndeye popup yakawanda-inoburitsa iyo inogona kuiswa mu countertop pachayo mukati mekupinda nyore kweiyo wiricheya mugari. Zvakanakisa switch dzinofanirwa kuve dziri pa48 ″ pamusoro pevhu padanho kuitira kuti vagone kusvika kune anogara iye wiricheya. Kana iye anogara asingakwanise kushandisa zvigunwe, rocker maitiro switch anogona kushanda zvakanyanya. Magetsi emagetsi ari pamadziro asina makabati anofanirwa kunge ari mashoma 18 ”pamusoro pevhu.
Midziyo yese inoshandiswa ne vakaremara vanhu vanofanirwa kuiswa vachichengeta mupfungwa kukwirira kwavo kana vari mu wiricheya. Kazhinji stovetops haina kukodzera vanhu vari mukati mavhiripu. Imwe yega yekubika kumusoro uye hovhoni inodiwa. Iyo yekubika yepamusoro inoda yakakwana mabvi nzvimbo pazasi pekaunda. Padanho repamusoro panofanirwa kuve neinodziya isina kupisa nzvimbo yekuisa zvinhu zvinopisa.
Ovheni inofanirwa kugadziriswa mukabhodhi yepasi kuti ive nyore kurodha uye kuturura. Kune yekuwachisa ndiro, iwo dhirowa dhizaini anogona kukwirwa nenzira yakajairwa, hapana zvigadziriso zvinodiwa. Iwo ekumberi kurodha iwo anozoda kukwidziridzwa 9 ”kuita kuti kurodha pasi nekuburitsa zvive nyore kubva ku wiricheya. Ma microwaves anofanirwa kuiswa pasi petafura. Firiji inoshanda zvakanyanya kune vanhu vari mavhiripu ndiwo ari parutivi nepadivi modhi kana yeFrance musuwo modhi ine firiji pazasi. Tinovimba wawana izvi wiricheya kufambidzana matipi ekicheni anobatsira.